Ardada Somaliyeed ee Hindiya Wax ka Barata | KEYDMEDIA ONLINE
Ardada Somaliyeed ee Hindiya Wax ka Barata
Hindiya oo ka mid ah wadamada ay Ardayda Soomaalidu wax ka baran jireen ka hor xiligii burburka Soomaaliya ayaa wali waxaa wax ka barta ardo farabadan oo ka kala timid guud ahaan gobolada Soomaaliya iyo waliba wadamada kale ee aduunka oo ay Soomaalidu ku nooshahay.
Ardayda Soomaalida e Dalkaan Hindiya wax ka barata o ay tiradoodu qiyaas ahaan garaayso 600 (Lix Boqol) oo Arday ayaa waxay wax ka bartaan jaamacadaha ugu waan wanaagsan uguna Qadiimsan Dalkan Hindiya sida: Osmania University, University of Madras, University of Mysore, Manipal University, NTR University, Andhara University, JNTU iyo kuwa kale o badan.
Ardayda Soomaaliyeed ayaa waxay dhigtaan kuliyado kala duwan o ay ka mid yihiin: Engineering, Computer Science, Bechelor of Commerce (B.com), Bechelor of Computer Application (BCA), Information Technology (IT), Bechelor of Arts (BA), Master of Business Administration(MBA), Master of Information Technology (MSIT), Medical Lab. Technician (MLT), Microbiology , Nursing, Radiology iyo kuliyado kale, marka laga reebo kuliyadda Caafimaadka, MBBS ama DOCTOR-ka tooska ah taas o ay sabab u tahay qiimaha lagu barto aad u qaali ah.
Habka Waxbarashada & Nolosha
Ardayda Soomaaliyeed ayaa ah kuwa aad u firfircoon marka la eego xaga Waxbarashada waxayna sameeyaan dadaal faraban iyagoo marka ay Waxbarashada bilaabanba horay kala qabsada duruusta isla markaana is dhex gal la sameeya Maamulka Jaamacada, macalimiinta iyo Ardada Ajaanibta ah ee kala duwan.
Waxayna marwalba ku dadaalaan inay ka faa’idaystaan fursada Waxbarsho oo ay nasiibka u yeesheen maadaama dhalinyaro badan o Soomaaliyeed aysan wali helin fursad Waxbarasho.
Dhanka Nolosha waa dad aad iskugu xiran, badanaa Jaamacaduhu ma lahan Guryo u gaar ah (HOSTEL) marka ardadu waxay dagaan guryo kira ah, waxayna u wada dagaan sida ay hadba isku kuliyad u yihiin ama isku Sanad amaba isku fahamsanyihiin, waxay kaloo leeyihiin xariiro joogta ah o Gobolkasta o ay Ardadu joogan waxay sameystan (Tajamac) ay ku kulmaan cabsida ALLE ay iskula dardaarmaan iyo sidii loo dadaali lahaa la iskuna caawin lahaa.
Waxaa jira kulamo dag dag ah o ay Ardadu mararka qaar isugu yimaadaan kuwaas oo la xariira arimaha Caafimaadka Ardada, arday la xirxirtay, muran ka dhex dhaca Ardada iyo Bulshada ay la noolyihiin mararka qaar, culays dhaqaale o laga yabo in u Arday so food saaro.
Hamiyada Ardaydu aad ayuu u wanaagsanyahay oo marka ay wax baranayaan waa niyad fiicanyihiin dadaal ayeyna sameynayaan waxayna ku fakarayaan in ay mar Saxbarashada dhameeyaan kadinba shaqooyin raadsadaan si ay ehelkii, dadkii iyo Dalkiiba wax ugu qabtaan.
Waxaana jira Arday badan o halkaan Waxbarashadii ka dhamaysteen oo Dalkii ku laabteen, Qaarkoodnah ay Macalimiin yihiin oo Jamacadaha Dalka wax ka dhigan Bulshadana wax ku taraan uguna fa’aideeyaan waxa ay soo barteen, qaarkoodna ay Shirkadaha ama Hay’adaha Dalka ka jira ka shaqeeyaan.
Soomaalida Hindya wax ka barata waa dad hamigooda la oran karo Mustaqbalka Dalka iyo Dadka meel ayey uga soo bixi doonaan.
Dhibaatooyinka iyo Caqabadaha soo wajaha Ardayda
Aradayda Soomaaliyeed e Hindiya wax ka barata dhibaatooyin badan ayaa soo wajaha, waxaa kaloo dhibku uu saameyn ku yeeshay Aradadii kale e Soomaaliya joogtay oo rabtay inay halkaan Waxbarasho u yimaadaan, dhibkuna wuxuu gaar u yahay Ardada toos Soomaaliya markii hore uga timid ama rabta inay ku laabtaan Soomaaliya, sababtuna waxay tahay:
Iyadoo Ardayga Soomaaliya ka imaanaya uu wato Passport Soomaali ah kaas o Visa-ha Waxabarasho e Hindiya lagu soo galo ay dhib ka mutaan.
Visa-ha Waxbarasho e Hindiya lagu soo galo waxaa laga soo saaraa Safaarada ay Hindiya ku leedahay Dalka Kenya maadaama aysan Soomaaliya Safaarad ku laheen.
Vis-ooyinka Safaarada Hindya ay Kenya ku leedahay laga so saaro ayaa ah ku qaab qaldan uga so baxa Safaarada, waxana dhacda marka Ardaygu halkan yimado ama Airpor-ka u ka so dago in la xiro amaba isagoo la aqbalay oo Waxbarashada Sanadkii Kowaad ama Labaad wata ama Sanadba u harsanyahay lagu yiraahdo Visa-hagu qalad ayu aha markasna la xiro kadibna la yirahdo Dalka isaga bax.
Hada waxaa joogsaday Ardadii Soomaaliya ka imaan jirtay Visa la'aan darteed. Waxaa kaloo jira Arday Waxbarashadii dhamaystay o sharci la'aan dartood dalkii ka bixi la.
Codsi ay Ardadu Dirayso
Ardayda Soomaaliyeed e Dalka Hindiya wax ka barata waxay codsi gaar ah u dirayaan Dowladda Soomaaliya iyo dhamaan aqoonyahanada iyo mas'uuliyiinta Soomaalida.
Dowlada Soomaaliya waxay Ardadu ka codsanaysaa inay wax ka qabato dhibaatooyinka Vis-oyinka e Ardada haysata iyo sidi ay ku heli lahaayeen wada sax ah oo fudud oo ay u maraan Vis-oyinka Waxbarashada e Dalka Hindiya iyo inaysan joogsan Ardadii Waxbarashada halkaan u imaan jirtay.
Waxaa jira Arday farabadan oo Waxbarashadii dhamaysay, iminkanah ku xayiran Dalkan Hindiya sharci la'aan owgeed, waxaana Dowladda Soomaaliya ay ka codsanayaan inay ka gacan siiso sidii ay Dalka ugu laaban lahaayeen.
Aqoonyahanada iyo Mas'uuliyiinta Soomaalida meelkasta o ay joogaan iyagana waxay ka codsanayaan inay ku dadaalaan inta Awoodooda ah inaysan joogsan ilaha iyo fursadaha Waxbarashada Ardada Soomaaliyeed.
Ardada Soomaaliyeed ee Dalka Hindya wax ka barata waxay sidoo kale ka codsanaysaa Warbaahinta Keydmedia.net inay ku xirto Worldwide Somali Students, si ay ugala qeyb qaataan dadaalka, Horumarka iyo isku xirka ay wadaan.
Waxay Ardadu sidoo kale Warbahinta Keydmedia.net ka codsanayaan inay sii balaariso wax qabadkooda ku aadan soo gudbinta iyo dhiiri galinta Waxbarashada Ardada Soomaaliyeed Dal iyo Dibad. Waana u Mahadcelineynaa Keydmedia.
Ardada Soomaaliyeed ee Hindiya wax ka barata waxay mar walba dareenkooda la wadagaan Ummadda Soomaaliyeed mid farxadeed iyo mid murugaba waxayna marwalba ILLAH ka baryaan in Dalka Nabad noo noqdo Dadka quluubtoodana RABBI hagaajiyo, karaamadii sharaftii iyo midnimadii Somaliweyna soo laabato.
Waxay kaloo Ardadu mahadnaq iyo dhiiri galinba u diraan Ardada Soomaaliyeed ee Dal iyo Dibadba wax ku barata xiliyadan adag iyo waalidiinta iyo ehelada mar walba u taagan saacidaadooda iyo dhiirigalintoda.
By Caydaruus Macalim Maxammed - Arday ka mid ah Ardada Somali ee Hindiya wax ka barata
Edited By Naciimo Warsame - Keydmedia.net - Xafiiska London